Kitaabni haaran Afaan Oromootiin barreefame yeroo dhihoo keessatti! |
Home Afaan Oromoo Kitaabni haaran Afaan Oromootiin barreefame yeroo dhihoo keessatti!
Kitaabni haaran Afaan Oromootiin barreefame yeroo dhihoo keessatti!
Barreessan Caalaa Hayiluuti, Hagayya 29, 2018
Kitaabni kuni waloo Caalaa Hayiluu Abaataatiin barreeffame. Mata duree kitaabichaas #DhalootaFincilaa jedhama. Kitaabni kuni walaloota gaggabaaboo fi dhedheeroo qabiyyeen isaa walaloota ammayyaa, afoolaafi walaloowwan aadaa lakkoobsan #100 caalan of keessa qabutu maxxansaaf qophaayee yeroo dhihootti dubbistootaf dhiyaata.
Jaalattootaa, dinqisiifattootaafi kanneen guddina hog-barruu Oromoof tumsaa turtaniifi tumsaa jirtan; kanneen guddinni hogbarruu keenyaa sadarkaa saba keenyaa waliin akka deemu dhimmamtaniif hojjachaa jirtan hunduu irraa qooda fudhachuu ni dandeessu.
Yoo Waaqni jedhe kitaabni kuni #Oromiyaafi biyya ambaa #Sweden keessatti maxxanfamuuf deema. Itti milkoofnan immoo ogeeyyii fi hawaasa keenya waliin eebbisiifnee achumaanuu waayee hogbarruufi afaan keenyaa irratti qorannooleen akak dhiyaatan yaalaa jirra.
Dhaabbilee dhuunfaafi mit-mootummaas ta’ee, namoonni dhuunfaa kanneen gargaarsa gochuu barbaaddan,jiraannan gammachuu kooti. Tarii kanneen raabsuufi maxxansiisufis deeggarsa gochuuf fedhii qabdan hunduu karaa
FB: Caalaa Hayiluu Abaataa
E.mail: aanaa2013@gmail.com ykn chalaabate.hailu1@gmail.com
Lakkoobsa bilbilaa: +467 078 54376 nu qunnamuu dandeessu.
Kitaabni kuni kuufama gadoo fi xiiqii,loogii fi dhiibbaa jaarraa ol nurra ture gumgumee,bulgaafannaaf dhibnaan waraqaa qabatan, jaalalaafi yaaddoo, Siyaasaafi hawaasummaa, abdii fi kakuu, Irbuufi diiggaa, gabrummaafi baqattummaa, gantummaafi gotummaa, obsaafi qaalloma, dhoksaafi gorsa, jiruufi waanjiraa sabaa, dheengaddaafi kaleessa Oromoo, akkasumas hardhaafi egeree keenya waa jedha.
Waloon qaalluus tahuu baatu waan ayyaannisaa jedheen dalaga,barreessa, sorora,dubbisaan kansaaf tahu keessaa fudhataa, dhaloonni ittiin qara baha!
Dubbisaatii yaadafi qeeqa keessan arjoomaa!
Barreessan Caalaa Hayiluuti
Good news for Afaan Oromo literature families, readers and followers of the Oromo literature!
My new poetry book titled #DhalootaFincilaa is now ready to be published. I will be delighted if any organization and individuals want to help to publish and distribute the book to readers in Oromia-Ethiopia and worldwide where Afaan Oromoo readers reside!
Previous article Ethiopia: Enhancing State Accountability Must Continue to End Impunity in Addressing Human Rights Violations
Next articleONN: Oromia News Network, report and news – August 29, 2018